Sida loo rogo ama MTS in DVD la MTS in DVD Converter (Windows 10 ka mid ah)
> Resource > DVD > Sida loo rogo ama MTS in DVD si fudud oo dhaqso (Windows 10 ka mid ah)
"Waxaan Canon HF100 ah oo lagu toogtay videos in .mts. Anigu ma aan kartaa badalo MTS in DVD . Sidee in la gubo si cajalladaha-RW DVD si aan iyaga ka dhigi kartaa in ciyaaryahanka DVD iyo ciyaaro iyaga? Waa maxay software waa in aan u isticmaali? "
Tan iyo markii ay kaamirada HD waa mid aad loo jecel maalmahan, dad badan ayaa wax badan oo MTS video files oo aad rabto inaad la wadaagto, kuwaas oo videos qoyska iyo saaxiibada on TV. Xalka ugu wanaagsan waa in ay gubaan MTS in DVD ujeedadaas. Si aad u sameeyo, waxa aan u baahan tahay xirfad MTS DVD Converter , iyo Wondershare DVD Creator waa kaliya mid ka mid ah kaamil ah. Barnaamijkan wuxuu u bedeli karaan oo keliya ma aha MTS video inay DVD, laakiin sidoo kale gubi karaa oo dhan loo jecel yahay videos kale si DVD oo aan laga badinin tayada video, qaabab video sida MP4, AVI, MOV, MKV, VOB, iwm ayaa dhamaantood la taageeray. Waxaa ka hel oo ay bilaabaan in ay ka files MTS abuuro DVD fudayd. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad u tagi kartaa si DVD Creator for Mac sida Converter MTS ah iyo DVD gubi.
Free download MTS in DVD Converter (Windows 8 taageeray):
Sida loo badalo iyo MTS gubi in DVD:
Hoos waxaa ku qoran tilmaan ku saabsan diinta files MTS in DVD ee PC Windows. Kaliya u hubso in aad ka hesho version saxda ah ee MTS ay u DVD gubi for your computer.
Tallaabada 1. Ku dar files MTS / M2TS
Guji "Import" in lagu daro MTS videos u DVD Creator in la sameeyo a disc MTS DVD. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, aad astaysto aad videos by beerista, qoqobada, falinjeeerka, codsanaya saamaynta video, iwm
Tallaabada 2. Customize DVD bedeley
Dooro menu DVD DVD aad ah. 40 Foomamka DVD menu oo lacag la'aan ah lagu bixiyo DVD Creator this. Waxa kale oo aad astaysto menu DVD oo ay badhamada beddelo, mab, soo jeeda, thumbnails, iwm dar music asalka ah si aad DVD si ay u soo jiidasho. Si aad MTS DVD la DVD menu, dooro "No Menu" template.
Tallaabada 3. Beddelaan MTS in DVD
Click to ku eegaan natiijada tafatir ah ay dhacdo in aad u hagaajin kara si gaar ah. Ugu dambeyntii, kaliya aad u tagi kartaa tab "Guba" oo waxaad ka samaysaa DVD ka files MTS ku daray in ay barnaamijka.
Talooyin : 1. bar ayaa meel disc cagaaran hoose ku tusi doonaa meel bannaan oo lacag la'aan ah disc ah; Waxaad dooran kartaa baaxadda DVD cusub oo u dhexeeya "DVD-R4.5G" iyo "DVD-R9.0G"; 2. Tayada wax soo saarka ee DVD gubanaysa sidoo kale waa in aad doorato, waxaad dooran kartaa "video tayada Standard", "video sare oo tayo leh" ama "taam u disc". 3. noocyada disc oo dhan waa la heli karaa, oo ay ku jiraan DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, iwm inta uu DVD gubi ay taageerto.
Aqoon Wadaag: Waa maxay MTS?
MTS waa kordhin file u qaab video digital qeexitaanka sare oo taariikhqorihii camera ah. Kaamirada HD sida Canon Vixia HG21, Canon Vixia HF S100, Canon HR10, Canon HF10, Canon HF100, Panasonic AG-HSC1U, Panasonic HDC-DX3, Panasonic Lumix madow-ZS3, Panasonic HDC-DX1, Sony HDR-SR1, Sony HDR- UX5, UX7, Sony HDR-SR11, SR12, iwm soo saaro videos la .mts / m2ts kordhin.
Beddelaan MTS in flv : Tani MTS in FLV Converter caawisaa si loogu badalo fiidiyo video saaxiibtinimo websites tayo kaamil ah.
Beddelaan MTS in DV : Beddelaan files MTS dhibaataynta qoyska ah ee iyaga loo dhoofiyo galay qalabka video tafatir sida iMovie, Final Cut Pro, Adobe jilitaankii Pro.
Beddelaan MTS in AVI Free iyo si fudud : doonaysaa si loogu badalo MTS in avi xor ah oo loo maqli sahlan? Halkan Fiiri xalka.
Beddelaan MTS in qaab kasta oo ku Mac: Wondershare Converter MTS u Mac kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo MTS in wax audio / video qaab ama qalab iwm
Top 10 DVD Kirada mulkiilayaasha ee Netflix ee 2014